8 Dabeecadood oo Aad Milyaneer ku Noqon Karto Muddo Kooban | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Yaad Eedi Doontaa?
AMISOM: Adeegayaasha Minjo-xaabinta Israaca Soomaliyeed!!
Cabdikhaadir Ibraahim Axmed, November 19, 2018
Wax Ka Ogow Faa’idooyinka Laga Helo Mooska
Miski Cabdinuur Salal, December 10, 2019
Afrikaan.so, February 26, 2016
CUNISTA CUNTOOYINKA CAAFIMAADKA LEH
8 Dabeecadood oo Aad Milyaneer ku Noqon Karto Muddo Kooban
Axmed Cabdi Qurbaawi — November 1, 2019
Joogtee wax akhriskaaga
Taajiriintu waxay mudnaanta kowaad siiyaan wax akhriska halkii uu lacag kaliya ka fakari lahaa. Sida uu qorey Brian “Sideetan iyo sideed boqolkiiba taajiriintu waxay soddon daqiiqo ama in ka badan ku bixiyaan maalin kasta wax akhris” Intooda badan waxay wax u akhriyaan si ay u kororsadaan aqoon ee kama ahan madadaalo.
Dadka hodanka ah waxay akhriyaan seddex nooc oo buuggaag ah: taariikh nololeedka dadka guuleystay, buugaagta ka shakeeya horumarka shaqsiga iyo taariikhda.
Toddobaatan iyo lix boqolkiiba dadka hodanka ah waxay jimicsi sameeyaan 30 daqiiqo ama in ka badan maalin kasta. Jimicsiga wuxuu noqon karaa orodka, dabaasha, socodka, ama wax kasta oo caafimadkaga iyo jirkaaga dhisaya. Jimicsigu wuxuu kobciyaah neerfaha maskaxda; jimicsigu wuxuu kaloo kordhiyaah soo saarka guluukooska. Guluukoosku waa sonkorta/shidaalka maskaxda. Shidaal badan oo aad quudiso maskaxdaada waxay dhashaa natiijo miro dhal ah.
La fariiso oo saxiib dhow ka dhigo dadka guuleystay
Waxaad uun u la’aragti tahay shanta qof ee kugu hareereysan. Had iyo jeer isha ku hay shakhsiyaadka higsashada leh, rajada fiican leh, xamaasad leh, fogaan araga iyo mustaqbal nuuraya leh. Geed dheer ka fuul kuwa rajo xumada iyo baasaysiga badan.
Ku tabaruc aqoontaada, maalkaga, muruqaaga iyo si walba oo aad dadka kale ku caawin karto
Si aad ula noolaatid dadka wanaagsan oo wada guulaystay ku bixi qayb ka mida waqtigaaga caawinta dadka kale. Way kuu baahan yihiin, ha sugin intay kuu sheeganayaan baahidooda, adigu bilow hana ka raadin abaal gud. Waa caalamadaha lagu yaqaan milyaneerka. Waa shaqsi aaminsan iskaa-waxuqabso oo u roon dadka kale.
Waa sababta dad badan oo hodan ah ayaa iskaa wax u qabso ugu shaqeeyaan ururada samafalka, una abuuraan kooxo ganacsi. Tani waxay kaa caawineysaah in aad noolaato nolol heer sare ah oo farxad iyo qaneeco dhamaystiran leh. Milyaneeradu waxay ku tabarucaan shan saacadood ama ka badan bil kasta. Mihiim ma ahan in aad lacag un ku tabarucdu. Immisa hibo, karti oyo aqoon baa jirta aad gaar la tahay adigu oo dadkaaga aad uga faa’iideyn karto? Isku kawaab adigu.
Is-xusuusi riyadaada mar walba
Riyadaadu waxay qeexaysaa noloshaada mustaqbalka. Adiga isku rumeeh riyadaada marka hore, aamin in ay macquul tahay dadaal yarna kaa xiggo rumaynteedda. Riyooyinkeena oo dhan waa run waana macquul haddii aan u howl galno. 61% milyaneerku wuxuu leeyahay riyo istiraatijidaysan iyo qorshe cad oo uu ku hawl galo. Ma garan karo riyadaaday, laakiin waxaan hubaah in ay macquul tahay. Riyo noocee ah ayaad ka leedahay nolosha? Isku jawaab adigu.
Ku soco himiladaada
Raacitaanka riyadaada iyo himilooyinkaaga ayaa abuura farxadda ugu weyn iyo guusha mustaqbalkaga. In kasta oo dadka badan kii raacaan himilada dadka kale sida: waalidkood iyo saxiibadood, hadaba natiijada ka soo baxaysa halkaas ma ahan hanti kugu filan. Dadka hodanka ah waxay qeexaan hadafyadooda waxayna daba galaan ilaa ay gaaraan halkey rabeen. Qeex hadafkaaga oo raaci u noqo himiladaada waalidkaa ma oga wax kuu suurta gal ah adiga, kaliya waa waalidkeen waana jecel nahay.
Ahamed ahaan hooyadey Ruqiyo oo ah gabadha dunida ugu qurux badan aana badalkeeda dunida idil siisteen markaan dhameeyey dugsi sare waxaa mugdi iiga jirey sidaan ku heli lahaa jaamacad. Galab baan la sheekeystay Hooyo ruqiyo, waxaa hadaladeedii ka mid ahaa “Hooyo iska joog, aqoon kugu filan waad bartey, waxba jaamacad kaalama maqna”.
Iyadu waxay ii diidaneyd welwelka iyo walbahaarka kama ahan naceyb aysan jaamacad ila jeclayn. Waalidkaa inta badan ma arki karaan adoo murugoonaya waxay ku siinayaan sida ugu fudud ee aad ku nafisi karto, laakiin guushu waxay ku xidhan tahay in aad naftaada khatar u galiso. La noolow mar walba shucuubtaada iyo himiladaada.
Seexo ugu yaar toddobo saacadood habeenkii
Hurdadu waxay muhiim u tahay guusha. Daraasad la sameeyey 89% milkiilayaasha iyo dadka hodanka ah waxay seexdaan toddobo saacadood iyo badan habeen kasta. Hurdadu waxay kobcisaah maskaxda, xusuusta iyo caafimadka jirka.
Goor hore kac
Ku dhawaad 50% milkiilayaasha iyo dadka hodanka ah waxay kacaan hiirta waabari. Dhamaantooda waxay toosaan ugu yaraan seddex saacadood ka hor inta aysan shaqadooda bilaabin. Hiirta waabari waa istaraatiijiyad lagula tacaalo nafta, laguna qoodeenyo wax-qabtka maalintaada. Waa lama huraan in aad aroorta hore kacdo. Waa kugu ceeb haddii Digaagadu kaa horseexato kaana hor kacdo. Kac shanta aroornimo waxay ku siinaysaa kalsooni aad runtii naftaada ku hagto iyo noloshaada.
Tags: 8 Dabeecadood oo Aad Milyaneer ku Noqon Karto Muddo Kooban
Next post Cunnadaada Ka Dhigo Mid Dheeli Tiran?
Previous post Faallo: Buugga SHANDARALEY
About the Author Axmed Cabdi Qurbaawi
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Waa qoraaga buuggaagta kala ah "Baro Luqadda Hindiga, iyo Indho Habeenno". Wuxuu caan ku yahay qorista sayniska iyo macdanta. Wuxuu kaloo qoraa mowduucyo xasaasi ah oo ku saabsan hormarinta shaqsiga iyo falsafada guusha. Waa hal-abuure ku raaxeysta akhriska buuggaagta iyo fekeradaha dadkii horre curiyeen.
Doqonimada Puntland Taal! 9.83 views per day | by Bukhaari Xirsi Faarax